Ifowuni: +86 57186162857
Imisebenzi yequmrhu leMibutho yokuKhuthaza uQoqosho yaseFenghua-kwi-Technology ye-HEO
Emva kwemini nge-15 ka-Agasti, uMbutho wokuKhuthaza uQoqosho lwe-Hangzhou Fenghua ubambe ishishini-wangena kwiyunithi kaSekela Nobhala Jikelele "itekhnoloji ye-HEO" ukuziva umtsalane weshishini lomboniso ovelayo kwicandelo lobugcisa bezamayeza. Hangzhou ...
Inoveli yeCoronavirus mutant ivela kwihlabathi liphela
ince ukufunyanwa kwe-Covid 19 virus e-UK ekupheleni konyaka ophelileyo, amazwe amaninzi kunye nemimandla axele ukosuleleka kwintsholongwane eguqulweyo e-UK, kwaye amanye amazwe afumene neenguqulelo ezahlukeneyo zentsholongwane eguqulweyo. Ngo-2021, ihlabathi wi ...
Ukwenzela ukutyebisa ubomi bexesha labasebenzi, ukhulule uxinzelelo lwabo emsebenzini, kwaye ubanike ithuba lokuphumla ngokupheleleyo emva komsebenzi, iHangzhou Hengao Technology Co, Ltd. iququzelele umsebenzi wokwakha iqela ngoDisemba 30, 2020, kunye nabasebenzi abangama-57 inkampani ithathe inxaxheba kulo msebenzi. Aft ...
Inoveli yeCorona inikwe ingxelo eNgilane, eMzantsi Afrika naseNigeria ukusukela kweyoMnga. Amazwe amaninzi kwihlabathi liphendule ngokukhawuleza, kubandakanya nokuvalwa kweenqwelomoya ezivela e-UK nase Mzantsi Afrika, ngelixa iJapan ibhengeze ukuba iyakumisa ukwamkelwa kwabantu bamanye amazwe ukuqala ngoMvulo. Ngokwe ...
Ithemba loshishino lwe-IVD
ngomphathi ku 20-12-24
Kwiminyaka yakutshanje, umzi mveliso we-vitro diagnostic (IVD) wasekhaya ukhule ngokukhawuleza. Ngokwedatha ekhutshwe luVavanyo lweMedTech, ukusuka kwi-2014 ukuya kwi-2017, intengiso yentengiso yehlabathi ye-IVD inyukile unyaka nonyaka, ukusuka kwi-49 yezigidigidi zeedola kwi-2014 ukuya kwi-52 yeedola ...
Uyintoni umahluko phakathi kwentsholongwane entsha ye-corona kunye ne-influenza
Okwangoku, imeko yendyikityha yomhlaba ilandelana. Ekwindla nasebusika ngawona maxesha aphezulu eziganeko zokuphefumla. Iqondo lobushushu elisezantsi liluncedo ekusasazeni nasekusasazeni intsholongwane entsha yomkhuhlane kunye nentsholongwane yomkhuhlane. Kukho umngcipheko wokuba ...
Iindlela zokufumanisa izifo ezosulelayo
Kukho iindlela ezimbini zokufumana izifo ezosulelayo: ukufumanisa i-pathogen ngokwayo okanye ukufumanisa ii-antibodies eziveliswa ngumzimba womntu ukumelana ne-pathogen. Ukuchongwa kweentsholongwane kungakhangela iantigens (zihlala ziiprotein zeproteni, ezinye zisebenzisa ...
Ifowuni: ivy +008618157136026 Ifowuni: vic +008613738091655 Inombolo yomnxeba: + 1008615168459686